लगातार बढेको बजार ओरालो लाग्दा लगानीकर्ता अन्योलमा | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर लगातार बढेको बजार ओरालो लाग्दा लगानीकर्ता अन्योलमा
on: १२ बैशाख २०७५, बुधबार १५:५५ मुख्य खबर, लगानी
वैशाख १२, काठमाडौं (अस) । बुधवार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ६० प्रतिशत घटेर बन्द भएको छ । कारोबार भएको १० मिनेटसम्म बढेको बजार त्यसपछि घटेर २ घण्टाको अवधिमा बढेको थियो । छोटो समयसम्म बढेको बजार अन्त्यमा ८ दशमलव ३९ अङ्कले घटेर १ हजार ३ सय ८६ दशमलव ४७ विन्दुमा पुगेको छ ।
अचेल बजार घट्नुको एउटा कारण नेपाली सेयर बजारमा अल्पकालीन लगानीकर्ता हाबी हुनु रहेको लगानीकर्ता बताउँछन् । ‘अलिकती नाफा आयो कि बेच्न दौडिहाल्ने लगानीकर्ता छन्,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘केही समय बजार ११ सयको रेञ्जमा आउँदा शेयर किनेकाहरुले अहिले नाफा बुक गर्न खोज्दा बजार घटेको देखिन्छ ।’ यस्तै इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेलले नेप्से १५०० पुगेपछि फेरि घट्छ भनेको भन्दै केही समाचार सार्वजनिक भएपछि त्यसको असर पनि बजारमा परेको हुनसक्ने ति लगानीकर्ताको भनाइ छ । ठूला लगानीकर्ताहरुले एक चोटि बजार घटाएर उठाउन खोजेका रहेछन् भन्ने मनोविज्ञान लगानीकर्ताहरुमा परेको उनको धारणा छ ।
कारोबार भएका १० समूहको परिसूचकमा ‘अन्य’ समूहको परिसूचक बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचक घटेको छ । सो समूहको परिसूचक शून्य दशमलव शून्य ९ प्रतिशतले बढेको छभने जलविद्युत समूहको परिसूचक १ दशमलव ३३ प्रतिशतले घटेको छ ।
कारोबार भएका १ सय ६० कम्पनीको ५ हजार ७ सय ६९ पटकको व्यापारमा ११ लाख ७ हजार ५ सय १३ कित्ता शेयरको रू. ५६ करोड १४ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस दिन सर्वाधिक शेयर कारोबार हुने कम्पनीमा नेपाल ग्रामीण विकास बैङ्क रहेको छ । यस कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. ६ सय ६२ मा रू. ४ करोड २४ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । साथै, ग्लोबल आईएमई बैङ्कको प्रतिकित्ता रू. ३ सय २१ मा रू. २ करोड १३ लाख बराबरको दोस्रो सर्वाधिक शेयर कारोबार भएको छ ।
यस दिनको कारोबारमा स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य ६ प्रतिशतले बढेको छ । साथै, रिलायन्स फाइनान्सको शेयर मूल्य ६ दशमलव १५ प्रतिशत र युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरको ५ दशमलव ८२ प्रतिशतले शेयर मूल्य घटेको छ । कारोबार भएका १ सय ६० कम्पनीमा ३३ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छभने १ सय १६ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । साथै, ३१ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ ।
यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स शून्य दशमलव ५१ प्रतिशत घटेर २ सय ९३ दशमलव १२ अङ्क पुगेको छ । नेप्सेको एडी रेशियो शून्य दशमलव २८ प्रतिशत रहेको छ । यसले बजार वियरिश वृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।